Withgagharị na ụmụaka na Europe | Akụkọ Njem
Withgagharị na ụmụaka na Europe
Site n’ebe ugwu ruo na ndịda, Europe bụ ebe akwadoro maka iso ụmụaka na-eme njem n’ihi na ọ na-agwakọta ihe ọchị na agụmakwụkwọ, nke nwere ike ịmasị ndị njem obere ụtọ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị ahụ na-enwe ọ gettingụ ịmata obodo ọhụrụ na ịkekọrịta ahụmịhe na-adịghị agwụ agwụ dị ka ezinụlọ, echefula ebe 4 zuru oke iji soro ụmụaka nọ na Europe.
2 Mmiri mmiri na Algarve (Portugal)
4 Ogige Playmobil (Germany)
Nwa ọ bụla na nrọ bụ ka otu ụbọchị gaa Disneyland Paris na izute niile na-agụ akụkọ si ọkacha mmasị ha na fim. Ime ya na Septemba, oge dị ala, ga-enye anyị ohere ịdekọ maka ọnụahịa dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na anyị eme ya site na parentsntanetị ndị nne na nna ga-enwe ike ịchekwa euro ole na ole, ebe ọ bụ na igbe igbe ọ nwere ike ịka ọnụ. Agbanyeghị, ileta ogige ntụrụndụ kachasị ukwuu na Europe n’oge ụbọchị pụrụ iche dịka ekeresimesi nwere ike ịbụ ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu.
N'otu oge na Disneyland Paris enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme: gbagoo ebe nkiri dị egwu, were Mickey, Snow White ma ọ bụ Queen Elsa na-ese foto, tụgharịa uche na ụlọ Alice's Labyrinth mara mma yana ịnụ ụtọ otu n'ime ihe ngosi abalị na-atọ ụtọ. Enwere ọtụtụ ihe iji hụ na Fastpass ga-abụ ezigbo onye enyemaka ezinụlọ. Nke a na usoro maka 3 na 9 ebe nkiri na-enye ohere ngwa ngwa ka ebe nkiri nke Disneyland Paris.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ ịmata Disneyland Paris, ị nwere ike iji ohere nke njem ahụ gosi ụmụaka isi ihe ngosi nke obodo ọkụ: Eiffel Tower a ma ama, Katidral Notre Dame, Arc de Triomphe ma ọ bụ Obí nke Versailles. The ga-enwe mmasị na akụkọ dị n’azụ nke ọ bụla n’ihe ncheta ndị a.
Mmiri mmiri na Algarve (Portugal)
Kemgbe ọ mepere, Zoomarine lekwasịrị anya n'ichekwa ndụ n'oké osimiri, ụdị ya na ebe obibi ya. Sa ahụ na ụmụ anụmanụ ndị a ga-abụ ahụmịhe nke ụmụaka agaghị echefu ma ha nwere ebe nkiri ndị ọzọ na ngosipụta na nnụnụ na anụ ọhịa ndị na-atọkwa ụtọ.
Ndị nne na nna ga-anụ ụtọ dịka ụmụaka ma ebe a ma n'ụsọ osimiri mara mma nke Algarve, ama ama maka mmiri dị ọcha na nke kristal, ebe mara mma na ọbụna sọọfụ. Osimiri ndị a na-akpọ Costa Vicentina zuru oke maka ịme egwuregwu a.
Foto | Blog Siam Park
Dabere na Tripadvadora, Ogige mmiri Siam Park dị na Adeje (Tenerife) eguzobewo onwe ya dị ka ihe kachasị mma n'ụwa. O nwere ọtụtụ ebe nkiri emere maka ezinụlọ na ndị na-achọ ezumike ma ọ bụ mmetụta siri ike.
Ihe kachasị ewu ewu bụ Tower of Power, slide dị mita 28 n’ogologo na ngụkọta nke njem 76 nke nwere ike iru 80 km / h. Ọgwụgwụ bụ nnọọ ihe ịtụnanya dịka njem ahụ na-ejedebe n'okwara nke nnukwu aquarium gbara ya gburugburu ebe ị nwere ike ịhụ shark, mantas na ụdị azụ ndị ọzọ.
Na mgbakwunye, Siam Park nwere nnukwu ebili mmiri na ụwa: mita 3 nke ebili mmiri nke kachasị ụjọ na-agba ọsọ.iji hụ ya ka ọ na-agbaji na ụkwụ gị na nsọtụ aja ọcha nke ụsọ osimiri ya. startzọ dị mma iji malite sọọfụ ma ọ bụ nwee ịwụli elu ebili mmiri.
Otu ihe ịtụnanya Siam Park bụ na o nwere obodo Thai kachasị ukwuu na mpụga Asia, nke ndị Thais wuru. Apụghị ikweta eziokwu? Whatzọ kacha mma iji zuo ike karịa ịnụ ụtọ echiche dị egwu nke ogige ahụ site na ịga ije n'akụkụ Osimiri Mai Thai, osimiri na-ekpo ọkụ nke na-agafe ogige a, nke nwere akụkụ nwayọ na ngwa ngwa na-enye gị echiche kacha mma banyere ya.
Foto | Kọntinentaleurope
Ogige Playmobil (Germany)
Abịa na isoro ụmụaka njem na Europe, ọ bụrụ na Germany nọ na nyocha gị, ha ga-ahụ n'anya ileta Playmobil Park, ogige ntụrụndụ a na-edebe na egwuregwu ndị ama ama nke ọgbọ toro.
Ogige ahụ dị na Zirndorf, kilomita ole na ole site na Nuremberg. Ọ bụghị ogige ntụrụndụ kama ọ bụ ogige egwuregwu nke ejiri paymobil aesthetics chọọ ya mma na mpaghara ọ bụla bụ egwuregwu na-adị ndụ. Na Parkmobil Park enwere slides, ebe mmiri, labyrinths, ebe ịrị, akụ akụ (na ájá na mmiri), wdg. Ihe niile ị chọrọ ka ụmụaka nwee ezigbo oge!
Ihe kacha mma maka ihe na-adọrọ adọrọ bụ traktọ pedal na mpaghara ugbo (site na 3 afọ), obere ụgbọ mmiri na ọdọ mmiri dị na mpaghara Hadas (site na 4 afọ) na ụgbọ ala pedal na mpaghara nke Policelọ Ọrụ Ndị uwe ojii (site na 6 afọ).
Dị ka ogige egwuregwu ọ bụla, ogige Playmobil nwekwara ụlọ ahịa ebe nchekwa ebe ị nwere ike ịzụta onyinye maka ụmụaka ka ha wee ghara ichefu ịnọ ebe a. Enwere ọtụtụ onyinye na-atọ ụtọ na nnukwu egwuregwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Withgagharị na ụmụaka na Europe